Budata World Truck Driving Simulator APK maka Android
Budata World Truck Driving Simulator
Free Budata maka Android (28.00 MB)
Budata World Truck Driving Simulator,
Banye nụgbọ ala nwere ikike na ngwa dị iche iche, gụnyere ụdị ndị Brazil, ndị Europe na ndị America, wee jiri onyonyo kachasị amasị gị maka gwongworo, trailers na ọkwọ ụgbọ ala. Nkwụsịtụ nime ụlọ, ngagharị nke mkpọmkpọ ebe, mmegharị nke antennas nwere ike ịdị iche dabere nụdị ala.
Debe ebe gị nime ụlọ ọkwọ ụgbọ ala nime egwuregwu, nke nwere atụmatụ ụgbọ ala dị ka nlegharị anya na mmezi nke ụdị njikwa dị iche iche, ezigbo anwụrụ ọkụ na -eku ume na nnyefe akpaka na akwụkwọ ntuziaka. Site na ịme anwansị nke ọrụ gwongworo, ị nwere ike ịkọwapụta atụmatụ ọ bụla ịchọrọ. (ụdị mkpọchi abụọ, breeki injin, autopilot, akụ, ịdọ aka na ntị, nhicha, nnukwu ọkụ, obere ọkụ)
Imeri ihe egwu na eserese dị adị yana nhọrọ nhazi iji rụọ ọrụ na ekwentị ndị na -esighi ike wee gosi na ị bụ ezigbo ọkwọ ụgbọ ala site na nkwọ, okporo ụzọ unyi na ọtụtụ ihe ịma aka ndị ọzọ. Nweta nnukwu maapụ nke ụwa mepere emepe yana obodo dị iche iche.
World Truck Driving Simulator Ụdịdị
Nha faịlụ: 28.00 MB
Mmepụta: Dynamic Games